Taliska qeybta 21aad ee Ciidamada xoogga dalka oo ciidamo u diray deegaano hoostaga Afbarwaaqo iyo Towfiiq Mudug. | YoobsanNews.com
Taliska qeybta 21aad ee Ciidamada xoogga dalka oo ciidamo u diray deegaano hoostaga Afbarwaaqo iyo Towfiiq Mudug.
Wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ciidamo u dirtay deegaano hoostaga Afbarwaaqo iyo Towfiiq oo dhamaantooda ka tirsan bariga gobolka Mudug oo maalmihihii la soo dhaafay lagu dagaalamay.
Ciidamadaan oo ku hubeysan Gaadiidka dagaalka ayaa waxaa ay ka ambabaxeen Magaalada Dhuusamareeb ,waxaana, iyaga oo kaashanaya Ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta ay kala dhex-geli doonaan labada maleeshiyo beeleed eek u dagaalamay deegaanada ka tirsan bariga gobolka Mudug.
Taliska qeybta 21aad ee Ciidamada xoogga dalka ee ka howlgalla deegaannada Galmudug ayaa la sheega in ay Ciidamo farabadan uu u diray deegaannada lagu dagaalamay ee Afbarwaaqo iyo Towfiiq ee bariga Gobolka Mudug.
Sidoo kale Odayaasha Dhaqanka iyo waxgaradka Gobolka Mudug ee labada dhinac ayaa waxay ku baaqayan joojinta dagaalka, iyadoo baaqoodu uu daba socdo dadaalo lagu doonayo in xiisadda lagu qaboojiyo.
Previous: Gudoomiyaha Nairobi oo maxkamadda ku gacan sayray
Next: Maxay dadka tujaarta ah u iibsanayaan baasaboorka Malta?